“ ဆုတ်ကိုင်မထားနဲ့ လွှတ်ချသင့်တာတွေ လွှတ်ချလိုက် ဆိုပေမယ့် ´´ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » “ ဆုတ်ကိုင်မထားနဲ့ လွှတ်ချသင့်တာတွေ လွှတ်ချလိုက် ဆိုပေမယ့် ´´
“ ဆုတ်ကိုင်မထားနဲ့ လွှတ်ချသင့်တာတွေ လွှတ်ချလိုက် ဆိုပေမယ့် ´´
Posted by ခင်ခ on Dec 14, 2012 in Creative Writing, My Dear Diary | 14 comments
တစ်ညနေ ညနေစာထမင်းစားပြီး ခင်ခ နေတဲ့ရပ်ကွက်လေးထဲ ဟိုနားဒီနားလမ်းလျှောက်ထွက်လာခဲ့ရာ လမ်းဆုံထောင့်နားမရောက်မှီမှာ ၆နှစ်အရွယ်လောက် လမ်းထဲက ကလေးတစ်ယောက် ခြေစုံရပ်ပြီးငိုနေတာ တွေ့လိုက်လို့ အဲဒီကလေးနားရောက်တော့
“ သား ဘာလို့ ငိုနေတာလည်းကွ ´´ မေးလိုက်ရင်ဘဲ၊ ငိုနေတဲ့ကလေးက
“ လေးလေး သားရေခဲမုန့်တွေ အောက်ကိုပြုတ်ကျသွာလို့ ဟီး ဟီး—— ´´
“ အော် ဒါများကွာ နောက်တစ်ခု ထပ်ဝယ်စားလိုက်ပေါ့ ´´
“ လေးလေး ကလည်း သားမုန့်ဖိုးက ၅၀ ဘဲရခဲ့တာ၊ နောက်တစ်ခုထပ်သွား ၀ယ်စရာမှမရှိတော့လို့ပေါ့ဗျ ဟီး ဟီး ဟီး—–´´
“ ရေခဲမုန့်က တစ်ခု ဘယ်လောက်မို့လဲကွ´´
“ တစ်ခု ၅၀ ပေးရတယ် လေးလေး ´´ ဆိုပြီး မျက်ရည်တွေကို လက်တစ်ဖတ်နဲ့ ပွတ်သုတ်ပြီးပြောတော့
“ အော် အဲလိုလား ဒါဆို လေးလေး ၁၀၀ ပေးလိုက်မယ်၊ မငိုနဲ့တော့ တိတ်တော့ သား စားချင်တဲ့ ရေခဲမုန့် နှစ်ခုတောင်စားလို့ရတာဘဲကွာ´´ ဆိုကာ ခင်ခ ငွေကျပ် ၁၀၀ တန်တရွက်ပေးလိုက်တာကို အဲဒီကလေးက လှမ်းယူပြီး နောက်ရေခဲမုန့်ဝယ်စားဖို့ ရေခဲမုန့်ရောင်းတဲ့ဆိုင် ခြေဦးလှည့်သွားမယ့်ဟန်ပြုပြီးမှ သူခုနကျသွား တဲ့ရေခဲမုန့်ကို ပြန်လို့ငုံကြည့်နေလို့
“ ကဲ ပါ အောက်ကျသွားတဲ့ ရေခဲမုန့်ကို ကြည့်မနေပါနဲ့တော့´´ ဆိုမှဘဲ အပြေးလေး ရေခဲမုန့်ရောင်းတဲ့ ဆိုင်ဆီပြေးသွားတာပေါ့ဗျာ။
တစ်ခါတုန်းကလည်း သူငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတွေနဲ့ ညနေဖက်ဘီယာဆိုင်တစ်ခုမှာ ခင်ခ တို့ဝိုင်းဖွဲ့ပြီးစားသောက် နေကြတုန်း စားပွဲထိုးလေးတစ်ယောက် စားစရာများထဲ့ထားတဲ့ ပုဂံဗန်းနဲ့သယ်လာရင်း ရေစိုနေတဲ့ကျောက်ပြား ခင်းကိုအဖြတ် မတော်တဆချော်လဲမလိုဖြစ်တော့ ခုနသယ်လာတဲ့ဗန်းပေါ်က ပုဂံနှစ်ချပ် လွတ်ကျပြီးကွဲပါ လေရော။ အဲဒီမှာ စားပွဲထိုးလေးက လွတ်ကျသွားလို့ကွဲသွားတဲ့ပုဂံကွဲစတွေကို ပြန်သိမ်းစဲရင် မျက်ရည်လေးကျ တာတွေ့လို့ အတော်လေးကြာ အဲဒီစားပွဲထိုးလေး ခင်ခ တို့ဝိုင်းနားလာရပ်တော့ အင်းတာဗျူးလုပ်ကြည့်တော့ “ မင်းက ခုနမတော်တဆ လွတ်ကျသွားလို့ကွဲသွားတဲ့ ပုဂံကွဲတွေပြန်သိမ်းနေတုန်း ဘာလို့မျက်ရည်ကျရ တာလဲ ဆိုင်ရှင်ရိုက်မှာကြောက်လို့လား´´ မေးပြီး အတူထိုင်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းကလည်း-
“ တမင်လွှတ်ကျတာမှမဟုတ်တာ မတော်တဆ လွတ်ကျတာဘဲ ဆိုင်ရှင်ကိုရှင်းပြလိုက်ပေါ့၊ ဒါမှမဟုတ် ငါ့တို့ဝိုင်းပြောပေးရမလား´´ ၀င်ပြောတော့ စားပွဲထိုးလေးက- လွတ်ကျသွားအောင်လျှောက်မိလိုက်တဲ့ သူ့ခြေ ထောက်ကိုစိတ်တိုလို့ရယ် ဒီလ လစာထုတ်ရင်ဒါဏ်ကြေး ဖြတ်ခံရမှာမို့ကို သတိရပြီး မျက်ရည်ကျမိတာလို့ ဖြေရှာတယ်လေ။
တစ်နေ့ကလည်း အထည်ဆိုင် ၄- ၅ ဆိုင်ပိုင်တဲ့ သူဌေးတစ်ယောက်နဲ့ မန်းက ဒိုင်မွန်းပလာဇာရဲ့ ပေါ်ထပ်မှာ ရှိတဲ့ကော်ဖီဆိုင်မှာစကားထိုင်ပြောပြီး ပြန်ကြဖို့ရွှေ့လျားစက်လှေကားနဲ့အဆင်း ပထမ ထပ်စက်လှေကား ထိပ်မှာ အဲဒီသူဌေးလက်မှာကိုင်ထားတဲ့ လက်ကိုင်ဖုန်းကလေး မတော်တဆစက်လှေကားလက်ကိုင်တန်းနဲ့ တိုက်ပြီးလွတ်ကျကာ စက်လှေကားဘေးကွက်လပ်ကနေ မြေညီထပ်ထိကျသွားပြီး မြေညီထပ်ရောက်တော့ ဟန်းစက်က အက်ကွဲသွားပါလေရော။ အဲဒီမှာဖုန်းလိုင်းကဒ် ကို အဲဒီသူဌေးထုတ်ယူလိုက်ပြီး ဟန်းစက်အသစ် ၀ယ်ဖို့ ကားနဲ့အသွား ကားမောင်းရင် မတော်တဆလွတ်ကျသွားတဲ့ ဟန်းစက်လေးကို သတိတရ နှမြောစွာနဲ့ အသုံးဘယ်လိုကောင်းကြောင်း ၀ယ်ထားတာသိပ်မကြာသေးကြောင်း စင်္ကာပူက၀ယ်လာတာဖြစ်ကြောင်း စိတ်မကောင်းတဲ့လေသံနဲ့ ပြောနေလို့ နှစ်သိမ်စကားပြောပေးခဲ့ရသေးတယ်လေ။
ဒီအဖြစ်ပျက်ကလေးတွေကို ထိုင်ပြီးသတိရသွားရင်း ခင်ခ တွေးမိတာတွေက –
ပထဆုံး အဖြစ်အပျက်လေးက ရေခဲမုန့်လွတ်ကျသွားတဲ့ကလေးအနေနဲ့ သူရခဲ့တဲ့ သူအတွက်တော့ဝင်ငွေလို့ ဆိုရတဲ့ မုန်ဖိုးကို သူစားချင်တဲ့ ရေခဲမုန့်လေးဝယ်ပြီး စားမယ်လုပ် ခါမှ မတော်တဆ အကုန်မစားရသေးဘဲ လွတ်ကျသွားခဲ့လို့ နောက်ထပ်လည်းပြန်ဝယ်စားစရာ အဆင်သင့် ၀င်ငွေမုန်ဖိုးလည်းမရှိတော့ အခုလို မတော် တဆ လွတ်ကျသွားတာဟာ အဲဒီကလေးအတွက်တော့ မဟာဆုံးရှုံး မှု့ကြီးအဖြစ် သူ့အရွယ် သူ့ဝင်ငွေ သူ့အဖြစ်ကို ယူကြုံးမရ၀မ်းနည်းရှာတာပေါ့ဗျာ။
ဒုတိယ အဖြစ်အပျက်လေးက စားပွဲထိုးလေး မမျှော်လင့်ထားဘဲ မတော်တဆ ရေစိုမှု့ကြောင့် ချော်သွားပြီး ပုဂံချပ်တွေလွတ်ကျကွဲသွားရလို့ သူလကုန်ရင် သူရမယ့်ရပိုင်ခွင့်ထဲက အဖြတ်ခံရမှာကို တွေးပူရင်း ၀မ်းနည်း နေတာလည်း သူ့အတွက်တော့ ဆုံးရှုံးလက်လွတ်ရမှု့တစ်ခုပေဘဲဗျာ။
တတိယ မတော်တဆ ဟန်းစက်လေးလွတ်ကျသွားလို့ သူအနေနဲ့ အဲလိုဟန်းစက်မျိူး ဆယ်လုံးမက ၀ယ်လို့ ရနိုင်တဲ့ ငွေကြေးချမ်းသာပေမယ့် လက်ရှိဟန်းစက်သုံးစွဲလို့ရနိုင်ပြီး မော်ဒယ်ဟန်းစက်အသစ် ကိုင်ချင် လို့ ထပ်ဝယ်လိုက်ရ ငွေကြေးသုံးစွဲလိုက်ရတာကို မနှမြောနိုင်ပေမယ့် မမျော်လင့်ဘဲ မမျော်လင်တဲ့ ငွေကြေး ကုန်ကျရမယ့်အတွက်တော့ သူအနေနဲ့ ဆုံးရှုံးမှု့တစ်ခုလို ခံစားသွားရတဲ့ ခံစားမှု့ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီမတူညီတဲ့ မတော်တဆလွတ်ကျမှု့တွေမှာ တူညီကြတာလေးက ကိုယ်ရပိုင်ခွင့် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထဲက ကိုယ်အသုံးတည့်စွာ မသုံးရဘဲနဲ့ လွတ်ကျမှု့အတွက် ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်မှု့ထဲက လျော့နည်းသွားလိုက်ရတာကို စိတ်ထဲမကျေနပ်မှု့က စိတ်မကောင်းမှု့ ၀မ်းနည်းမှု့ ခံစားသွားရမှု့ကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ကြတာဘဲ မဟုတ်လားဗျာ။
ပုတုစဉ်လူသားတွေဆိုတော့ မိမိအတ္တဟိတ ရှေ့တန်းတင် လက်ထဲမှာဘဲကိုင်ထားချင်ကြတာလေ မိမိရထားတဲ့ ရပိုင်ခွင့် ပိုင်ဆိုင်ခွင့်ကို ဘယ်လျော့ချင်ကြမလဲ ပိုပြီးတိုးလာမယ်ဆိုရင် ပိုလို့တောင်လိုချင်ကြတဲ့သူတွေလေ။ ဒီတော့ လက်ထဲဆုတ်ကိုင်မထားနဲ့ လွှတ်သင့်တာတွေ လွှတ်ချလိုက်လို့ ဆိုပေမယ့် တကယ်လွှတ်ချလိုက်တာ မဟုတ်ဘူး မတော်တဆ လွတ်ကျသွားတာတောင် စိတ်မကောင်းဖြစ်ကြ နှမျောတတ်ကြရင် တမင်တကာကို လွှတ်တာ ချရမယ်ဆိုရင် ဘယ်လိုများခံစားကြရမလဲ တွေးဆသာကြည့်ကြပါလို့- – – – – ။
ကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးတွေနဲ့ ခင်ခရဲ့ အတွေးကို ဟိုတစ်စ ဒီတစ်စ ရေးလိုက်မိသောအခါပေါ့ဗျာ။
ကလေးငယ်လေး လွတ်ကျခဲ့တဲ့ ရေခဲမုန့်လေးဟာ ကလေးငယ်အတွက် တော်တော်ဝမ်းနည်းစရာ
စာပွဲထိုး ကျကွဲတာကျတော့ သူလျော်ပေးရမယ် ဆိုပေမယ့် သူဝင်ငွေရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း သာဖြစ်တော့
သူထေး ဖြစ်တဲ့လူ ကျကွဲတာကျတော့ သူအတွက် ဘာမှထိခိုက်မသွားနိုင်တဲ့ ပမာဏပါ။
ဒါပေမယ့် ပိုက်ဆံရှိတဲ့လူက မရှိတဲ့လူထက် ပိုပြီး ပိုက်ဆံကို နှမျှေားတယ်ဗျ
ပုဂံ ဘီယာ စားစရာတန်ဖိုး
ဒီသုံးခုမှာ တန်ဖိုး အနည်းအများကတော့ လူတိုင်းသိပြီးသာပါပဲ ကျနော် အမြင်တော့ စိတ်ခံစားမှုမှာ
သွားပြီးကွာပါလိမ့်မယ် ကလေးငယ်ရဲ့ စိတ်ခံစားမှု စာပွဲထိုးရဲ့ စိတ်ခံစားမှု သူထေး ရဲ့စိတ်ခံစားမှု
ကြားဖူးတဲ့ စကာပုံလေးတစ်ခုရှိတယ်ဗျ လှေသူကြီး လှေမှောက်တာက ကိစ္စမရှိဘူး သူတောင်းစား
အခုလို လူကြီးမင်းရဲ့ ကိုယ်တွေ့ ဖြစ်ရပ် နဲ့ တူတဲ့စကားပုံလေးကို ပြန်လည်ဝေမျှပေးလို့ဝမ်းသာပီတိဖြစ်ရပါတယ်
ဟုက်ပါတယ် ကပေရေ ကျုပ်ကလှေမှောက်ခဲ့တာပါ။
ဘယ်လိုဘဲ လွတ်ကျကျ ဆုံးရှုံးတာခြင်းအတူတူပါဘဲ။
အဲ မတတ်သာလို့လွှတ်ချလိုက်သူများကတော့ ပိုနှမျောပေမယ်နော
ပိုစ့်ရည်ရွယ်ချက်လေးနဲ့ကိုက်သမို့ ကိုပေါက်ရေ BC ပေးလိုက်တယ်နော်။
အန်ကယ်ကြီးရေ အန်ကယ်ကြီးပြောသလို လွှတ်သင့်လို့ကိုစိတ်ဆုံးဖြတ်ပြီး ကိုယ်တိုင်ကလွှတ်ချတာမျိုး
ဖြစ်ကြရင် ကောင်းတာပေါ့ခင်ဗျ။ အခု အတော်များများ ကောင်းတာရော မကောင်းတာရော လွှတ်ချရမှာ စိုးနေကြပြီး မလွှတ်ချမှီ လွတ်ကျတော့ ၀မ်းနည်းနေကြတာကိုပြောတာပါဗျ။ အတ္တတွေကြီးနေကြတယ်လေ။
ကျမအတွေးကတော့ လက်ထဲက အမှိုက်ကို လွှင့်ပစ်လိုက်သလိုမျိုး ….
စိတ်ထဲက အရှုပ်အထွေးတွေကို သိပြီး လွှတ်ချလိုက်တာမျိုးကို ဆိုလိုတာမို့….
လွှတ်ချလိုက်ရတဲ့အတွက် စိတ်လက်ပေါ့ပါးပြီး အကျိုးများလိမ့်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
ကိုခင်ခပြောသလို လွတ်ကျတာတွေကတော့ သူ့နေရာနဲ့သူ တန်ဖိုးရှိတာတွေ ပျက်စီးဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အတွက် နှမျောစရာပေ့ါ။ :eee:
မှန်ပ အမ မမ ရေ အမှိုက်တွေကို လွှတ်ချသင့်ပေမယ့် တစ်ချို့က မလွှတ်နိုင်ရက်ဘဲ စုသိမ်းထားနေစဲပါ။
လွှတ်ချလိုက်ရတဲ့အတွက် စိတ်လက်ပေါ့ပါးပြီး အကျိုးများလိမ့်မယ်လို့ ပြောတာကို မယုံနိုင်ဖြစ်နေ ကြတုန်းပေါ့ဗျာ။
မတော်တဆ လွတ်ကျသွားတာက ကိုယ့်အပြစ်ကြောင့်ဆိုပြီး ဖြေသာနိုင်ပေမယ့် မတတ်သာလို့ လွှတ်ချခဲ့ရတဲ့ အခါ ရင်ထဲမှာ နင့်နေအောင် ခံစားရပါတယ် အခုလေးခရဲ့ ပို့စ်ကိုဖတ်ပြီး လွတ်ကျခဲ့တာနဲ့ လွှတ်ချခဲ့တာ ဘယ်အရာက များနေပြီလဲဆိုတာ စဉ်းစားနေမိတယ်
ဒီမှာတော့ လုယူထားတာတွေ ….လူမိနေပြီ
လွှတ်ချရင်တော့အကျိုးရှိမှာပါ….၊ ပြန်လုရရင်တော့ ?????
မဗုံဗုံရေးမှဘဲ ကျွန်တော်လည်း လွတ်ကျခဲ့တာနဲ့ လွှတ်ချခဲ့တာ ဘယ်အရာက များနေပြီလဲဆိုတာ စဉ်းစားရမယ့် အတွေးတောင်ဖြစ်လာပြီဗျာ၊ ကျေးဇူးပါ။
Fall Guy တင်တဲ့လင့်ကိုဖတ်ရလို့ကျေးဇူးနော်။ ခင်ခ က ရှောင်လင်ကျောင်းထွက်မို့ အဲဒီလင့်ထဲပါတဲ့ အကြောင်းအရာကို ပြန်မဆွေးနွေးနိုင်တာ ခွင့်လွှတ်ဗျာ။
အခုတော့အချိန်မရတော့လို့လစ်ပြီ.ဗျို့ ။
ပိုသာတာကို လိုချင်လို့ လက်ရှိကို လွှတ်ချတာ ကတော့